Kuwait oo 10 milyan ugu deeqday abaarta - BBC Somali
Kuwait oo 10 milyan ugu deeqday abaarta
Image caption Xubno reer Kuwait ah
Dowladda Kuwait ayaa soo direysa gargaar degdeg loogu baahan yahay oo qiimahiisu gaarayo 10 milyan oo dollar oo la siinayo dadka abaartu saameysay ee dalka Soomaaliya. Malaayiin dad ah ayaa Soomaaliya ku dhibaateysan kuwaas oo gaajo iyo macluul ka soo gaartay abaartii ugu xumayd ee dalkaasi ku dhufatay muddo 10 sano ka badan.
Qaybta ugu horreysa gargaarka Kuwait soo direyso waxaa Soomaaliya la geyn doonaa labo maalmood kaddib oo ku beegan maalinta khamiista ee toddobaadkan, sidaasna waxaa BBC-da u sheegay Cumar Xaaji Cli oo loo yaqaan Cumar Gadhle oo dhinaca saxaafadda u qaabilsan safaaradda Kuwait ee London.
Wasiiru-dowlaha golaha wasiirrada ee dalka Kuwait, Cali Al Rashiid, waxaa uu sheegay in go'aanka dowladda Kuwait gargaarka ugu direyso Soomaaliya uu ku salweysan yahay talooyin uu soo jeediyay Amiirka xukuma dalka Kuwait, Sheikh Sabaax Al Axmed Al Jaabir Al Sabaax.
Gargaarka waxaa qaybin doona hay'ad samafal oo reer Kuwait ah oo la shaqeynaysa ururka Bisha Cas ee dalka Kuwait iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas.